Mpanara-dalàna momba ny fahasalamana eropeana: aza mandeha any amin'ireo nosy grika!
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana » Mpanara-dalàna momba ny fahasalamana eropeana: aza mandeha any amin'ireo nosy grika!
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nahasarika mpitsidika marobe ny nosy 13 any Greece, anisan'izany i Mykonos sy Santorini, izay mampiroborobo azy ireo ho toerana tsy misy "COVID", fa ankehitriny, ny fanaovana dia any amin'ny faritra dia azo atao ara-bakiteny raha tsy misy atahorana.
Nampitandrina ny fialan-tsasatra ny nosy Aegean.
Ny fitomboan'ny tranga COVID-19 dia notaterina tany amin'ireo nosy fizahan-tany grika.
Tao anatin'ny 14 andro, tranga COVID-500 maherin'ny 19 no hita tany.
The Ivon-toerana Eoropeana misoroka aretina sy fanaraha-maso (ECDC) Nampitandrina ny mpanao fialan-tsasatra amin'ny fandehanana any amin'ny Nosy atsimon'i Aegean any Gresy taorian'ny nitateran'ny tompon'andraikitra ny fitomboan'ny tranga COVID-19 tany.
Gresy nahasarika mpitsidika marobe amin'ireo nosy 13 ao aminy, ao anatin'izany ny Mykonos sy Santorini, izay mampiroborobo azy ireo ho toerana tsy misy "COVID", fa ankehitriny, ny fitsangatsanganana any amin'ny faritra dia azo atao ara-bakiteny raha tsy misy atahorana.
Ny sarintany fitsangantsanganana ECDC dia rafitra misy rihana dimy izay ahitana ny loko mena mainty - izay noso-doko ny nosy atsimon'ny Ranomasina Aegean nanomboka androany - dia midika fa tao anatin'ny 14 andro dia tranga 500 mahery no voan'ny aretina mampidi-doza Ery.
Mpanara-dalàna Eoropeana: Aza mandeha any amin'ireo nosy Greek!
Ny governemanta grika dia nanokatra ireo nosy ho fizahan-tany tamin'ny lohataona 2021 tamin'ny fanantenana ny fanarenana ny toekarena eo an-toerana taorian'ny vanim-potoana nandrava ny fameperana ny dia.
Raha mpizahatany 31.3 tapitrisa no nitsidika an'i Gresy tamin'ny taona 2019, io isa io dia nidina 76.5% ho lasa 7.4 tapitrisa fotsiny tamin'ny taona 2019, hoy ny Ivotoerana Fikambanan'ny Orinasa Fizahantany Gresy.
Mbola tsy taitaitra anefa ny tompon'andraikitra grika, ary i Manolis Markopoulos, filohan'ny Fikambanan'ny Hotely Rhodes, dia nilaza fa ny indostrian'ny fizahantany dia "miandry ny tsena hihetsika" amin'ny tombatombana fanavaozana nataon'ny ECDC alohan'ny hamaly.
Fialantsasatra grika malaza iray hafa, nosy Kreta, no nahazo izany toe-javatra “mampidi-doza” izany herinandro lasa izay.